Borrasca Miguel: njirimara, nhazi na nsonazụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị maara na ihu igwe nwere ike bụrụ nke a na-apụghị ịkọwa akọwa ebe ọ bụ na ọ bụ nsonaazụ nke ọtụtụ mgbanwe na-agbanwe ụkpụrụ ha n'oge dị mkpirikpi. Otu n'ime nsonaazụ mgbanwe ndị a metụtara gburugburu bụ squall Miguel. Ma ọ bụ na n'ọnwa nke June 2019 ihe mgbawa nke cyclogenesis nke ihe kachasị ịtụnanya na nke dị egwu mere. Ọ bụ oké ifufe ma nwee usoro mgbawa na-agbawa agbawa na usoro ikuku dị ala. Ihe a bụ ihe a na-ahụbeghị mbụ ma ọtụtụ jikọtara ya na mgbanwe ihu igwe.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile, mmalite na nsonaazụ nke oke mmiri Miguel.
2 Ndị kpatara oké ifufe Miguel
3 Mbido nke oké ifufe Miguel
4 Mmechi nke a iju onu
Ọtụtụ ndị na-amụ gbasara ihu igwe na ndị na-ekwu gbasara ihu igwe ekwenyeghi na ihe na-abịa na mbido June 2019. Oké ifufe na-aga ịmalite na ugwu ugwu nke Iberian Peninsula n'otu oge na ọ ga-enweta usoro nke cyclogenesis na-agbawa agbawa. Ọ bụ ihe ọhụụ pụrụ iche ọ bụghị naanị n’oge nke afọ ọ mere, kamakwa na latitude nke ala anyị dị.
Ihe owuwu ndị a na usoro ndụ na-eme ka mmiri dị omimi bụ ihe a na-ahụkarị n'oge oge oyi n'oge oyi na nnukwu ugwu ma ọ bụ n'etiti Oke Osimiri Atlantic. Ekwesiri iburu n'uche na nguzobe nke oke ebili mmiri na-ewere ọnọdụ n'oge oyi ebe ọ bụ na ndị na-ahụ maka ihu igwe ga-ewere ụfọdụ ụkpụrụ ka ha wee mee. Anyị nwere ike ịsị na oge nke oke ikuku mmiri na usoro cyclogenesis na-arụsi ọrụ ike ma na-agbasi ike n'oge oyi na mgbago ugwu.
Mgbe ụfọdụ, e guzobere oké ifufe nwekwara ike ime n'oge opupu ihe ubi na oge mgbụsị akwụkwọ, mana adịkarịghị n'oge ọkọchị. Nke a bụ otu n’ime ihe kpatara ya oké ifufe Miguel bụ onye a na-ejighị n'aka na onye na-achọ ịmata ihe. Ihe na-akpata ma ọ bụ ihe nke oké ifufe miri emi na usoro nke cyclogenesis na-arụsi ọrụ ike ma sie ike n'oge oge oyi na mgbago ugwu.
Ndị kpatara oké ifufe Miguel
Ka anyị lee ihe kpatara ọgba aghara Miguel na ihe mere ha ji were n'oge a n'afọ. Osimiri jet dị n'ịdị elu bụ onye na-akwọ ụgbọ mmiri nke ifufe Atlantic ebe ọ bụ na ọ na-esiwanye ike ma na-erughị ala na ohere latrịtara na North Atlantic Ocean. Okpomoku di iche n’etiti okpomoku ma obu okpomoku oku di iche oyi polar ikuku uka bu ihe kachasi oputa n'ime ọnwa oyi. Ekwesiri iburu n'uche na ihe omimi ndi a na ike nke ugboelu na-eme ka obi ojoo di ukwuu nke na-eme oke mmiri ozuzo.
Ọnwụ nke abụọ na-etolite na mpaghara a nke ike gradient siri ike dị ọtụtụ karịa n'oge ọnwa oyi. Nke a na - emekwa ka ọnọdụ okpomọkụ dị iche. Ihe ọzọ nwere ike ime na oke ikuku Miguel bụ ikuku nke ikuku polar nke na-ejikọtakarị ya na ọdụ ụgbọ mmiri siri ike ma nwee ike ibute ebili mmiri nke nwere ike ịmalite usoro nrụgide dị ala na cyclogenesis.
E nwere ihe ndị ọzọ nke abụọ nwere ike ịkwado usoro cyclogenesis n'oge oyi, ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa na nke a. Cyclogenesis bu nguzobe nke ikuku site na nsogbu nke ikuku. N'ihe banyere mgbawa cyclogenesis, ọ na-ezo aka na nkụda mmụọ dị na ikuku, na-ebute oke ikuku mmiri. Ma cyclogenesis na mmiri jet bụ isi ihe maka mmepe, ndozi na mmụba nke oké ifufe.
Mbido nke oké ifufe Miguel
E guzobere oké ifufe a n'okpuru ọnụnọ nke ụdị ngwa ngwa nke cyclogenesis na ngwa ngwa. Oke oke ikuku dị elu, polar jet na dobe na ọkwa dị ala dị na mpaghara nke ikuku dị iche iche siri ike, nke a maara dị ka mpaghara baroclinic na akwa dị ala.
Site na mmalite nke June ọ nwere ike hụrụ na ugboelu iyi bụ nnọọ ufiop na ohere na lowered. N'aka nke ọzọ, oke oyi metụtara a na-egosipụtakwa akara ma gosipụta ọdịiche dị na ikuku ikuku na-adị na mbụ n'ihi nrụgide na-adịghị arụ ọrụ na-adịghị arụ ọrụ Nsonaazụ nke ihe a niile bụ mmụba nke grajentị ọkụ n'okpuru axis nke jet ahụ. Nke ahụ bụ, a siri ike baroclinity. Ala sekọndrị na ala n'ígwé ndị nọ n'ógbè ike gradient ike bụ nke na-enweta usoro mgbawa nke cyclogenesis.
Ọnọdụ a niile bụ ihe jọgburu onwe ya n'ụdị ya na ike ya. N'ihi nke a, squal Miguel dị obere. Iji mee nke a, egosipụtara maapụ anomaly ahaziri nke na-egosi anyị ogo adịghị mma nke ụgbọelu jet nwere ike iweta yana ike ya. Igwe ugboelu bu onye isi okwu banyere onodu a. Nke a bụ n'ihi na ọ bụrụ na ugbo elu na-abịa n'ike si n'ogo kachasị elu, na obere latitude ọ nwere ike ime ikuku ikuku ruru 150-200 km / h. Ọ bụghịkwa nkịtị nke ikuku na-esote oyi nke na-eduga ụgbọ elu polar na nke ahụ mere ka baroclinity dịkwuo karịa na mpaghara ebe e guzobere oke Miguel.
Mmechi nke a iju onu
Squall Miguel bụ ihe a na-adịghị ahụkebe nke hapụrụ ndị amụma na ndị amụma nwere uto dị egwu n'ọnụ ha. Anyị nwere ike ịsị na nguzobe na omimi nke mbido a bụ ihe ndị anaghị adị n’usoro nke ndị bu ụzọ mana ha dịkwa ụkọ n’ụdị oge a n’afọ. O kwubiri na obu oke ihe siri ike na mpaghara baroclinic na akwa kachasị ala maka ebe na ụbọchị nke anyị nọ.
Ihe ndị a niile emeela ka oké ifufe Miguel banye na akụkọ ntolite dị ka otu n'ime ụkọ ebe anyị nwere ndekọ nke ihu igwe. Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oké ifufe Miguel, njirimara ya na nhazi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Squall Miguel